Kely: natao ny fanaovana famoahana atiny Analytics. Martech Zone
Kely: natao tsara ny famoahana atiny Analytics
Zoma, Aogositra 19, 2016 Zoma, Aogositra 19, 2016 Douglas Karr
Raha mampiasa vola amin'ny fampivoarana atiny ny orinasanao dia hahita fenitra ianao Analytics tsy latsa-danja noho ny mahasosotra. Ireto misy antony vitsivitsy… mpanoratra, sokajy, daty famoahana ary fanamarihana. Misy fanontaniana manokana napetraky ny orinasanao fa tsy azonao valiana tsotra izao:
Inona ny atiny navoakanay tamin'ity volana ity izay nahomby indrindra?
Iza no mpanoratra manery ny fivezivezena indrindra amin'ny tranokalanay?
Inona ireo marika malaza indrindra?
Inona avy ireo sokajy atiny malaza indrindra?
Parse.ly mpiara-miasa amin'ny mpampanonta nomerika hanome fahitana mazava amin'ny mpijery amin'ny alàlan'ny intuitive Analytics sehatra. Mpanoratra, tonian-dahatsoratra, mpitantana tranokala ary teknolojia an'arivony maro no efa mampiasa Parse.ly mba hahafantarana izay atiny misarika ny mpitsidika tranokala, ary ny antony. Ny dashboard sy API an'ny Parse.ly dia ampiasain'ny mpanjifa hananganana paikady nomerika mahomby izay ahafahan'izy ireo mitombo sy mampiditra mpihaino mahatoky.
Ny Parse.ly dia manaparitaka ny zava-bitan'ny atiny ho anaty dashboard mora levona, ao anatin'izany ny topy topimaso, fahombiazan'ny mpanoratra, fitaovana, fomba fijery ara-tantara, fampisehoana an-tsehatra, fampisehoana fizarana ary referrer. Azonao atao koa ny mamorona sy mandefa tatitra.
Ny fiasa Parse.ly dia misy:
Dashboard amin'ny atiny - Ny tabilao votoatin'ny fotoana maharitra Parse.ly dia atokisan'ny mpiasa mihoatra ny 700 amin'ireo tranokala be mpandeha indrindra eto an-toerana, anisan'izany ny TechCrunch sy The Intercept. Izy io dia mahazaka metrika any ivelany, toy ny fomba fijery, mpitsidika, fotoana ary fizarana.
API - Parse.ly's API mamintina ny fampahalalana momba ny fifamoivoizana sy ny atiny ho an'ny tanjona mba hanomezana fomba haingana hanomezana rohy atiny amin'ny tranonkala; saripika fifamoivoizana ho an'ny fanondranana angon-drakitra haingana; na fampidirana tsotra ny angon-drakitra fifamoivoizana Parse.ly amin'ny rafitra fitantanana atiny efa misy. Izy io dia fitaovana fampidirana ho fampidirana haingana ireo tranokala efa misy, fampiharana ary tatitra miaraka amin'ny angon-drakitra Parse.ly - ao anatin'izany ny angona fifamoivoizana amin'ny fotoana tena izy.
Data Pipeline - Ny Data Pipeline an'ny Parse.ly no API faratampony, mandefa ny angon-drakitra momba ny tranokalanao, ny rindranasa ary ny mpampiasa anao, miaraka amin'ny tabataba kely sy malefaka faran'izay betsaka. Izy io dia fomba manankarena hanalana ny 100% ny angona ao ambadiky ny Parse.ly's Analytics, ary diniho izany raha mila izay ilain'ny fikambanana misy anao manokana. Izy io dia mahazatra, ary afaka manohana hetsika fanao isan-karazany. Liana amin'ny fandrefesana ny halalin'ny horonan-taratasy, hetsika fizarana eo an-toerana, tsindry fahazoan-dàlana atoro, fahatsapana doka azo jerena, na famandrihana amin'ny mailaka? Ny tsirairay amin'izy ireo dia azo alain-tahaka ho hetsika mivaingana, alefa any amin'ny Parse.ly, ary atolotra amin'ny alàlan'ny Data Pipeline.
Lahatsoratra Screen Parse.ly
Referrers Screen Parse.ly
Reports Screen Parse.ly
Mpanoratra Screen Parse.ly
Hijery ny tantara Parse.ly
Overview Screenshot Parse.ly
Fitaovana Screen Parse.ly
Tags: mari-pahaizana momba ny mpihainoanalytics momba ny atinyfahitana atinymetatra momba ny atinymetatra fampisehoana atinyparse.lyparselympanoratra manara-masofanarahana amin'ny datin'ny famoahanasokajy fanarahanamari-pamantarana
Douglas Karr Friday, August 19, 2016 Friday, August 19, 2016
Ny 4 P an'ny fanatsarana ny motera maoderina
Ahoana ny fikajiana ny sandan'ny andavanandron'ny mpampiasa fampiharana finday anao